तिहारै आयो, लौ झिलिमिली, ए सुन हजुर भैलिनी आइन् आँगन…. – Etajakhabar
यादव खरेल तिहारको वेला मेरो घरमा पनि देउसीभैली खेल्नेहरू आउँछन् । गीत बजाएर नाच्छन् । ‘तिहारै आयो, लौ झिलिमिली, ए सुन हजुर भैलिनी आइन् आँगन…. ।’ म हेरिरहन्छु, सुनिरहन्छु । तर, मैले नै त्यो गीत लेखेको भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । मैले आजभन्दा २४ वर्ष पहिले यो गति लेखेको हुँ । हुन त मेरो करिअर ५० वर्ष पहिले नै सुरु भएको हो । थुप्रै चर्चित गीतहरू पनि दिइसकेको छु । तर, यो गीत भने ‘स्वर्ग’ भन्ने फिल्मका लागि लेखेको थिएँ । फिल्म ०५१ सालमा रिलिज भएको थियो । यो गीतका स्मरणहरू मसँग निकै धमिला छन् । मलाई संगीतकार शम्भुजित बास्कोटा र निर्देशक शम्भु प्रधानले फिल्मको कथा सुनाएपछि मैले यो गीत लेखेको थिएँ । सायद यो गीत लेख्न मलाई त्यति लामो समय लागेन । तीन दिनमा तीनवटा गीत लेखेर फिल्ममा दिएको रेकर्ड पनि थुप्रै छन् मसँग ।
फिल्मको गीत र स्वतन्त्र गीतमा के फरक हुन्छ भने फिल्मी गीतलाई परिस्थिति र कथामा आधारित भएर लेख्नुपर्छ । स्वतन्त्र गीत संस्कृतिलाई पनि ध्यान दिएर लेख्न सकिन्छ । ‘स्वर्ग’को गीतमा तिहारको कथा त छ । तर, अलि पछि गइसकेपछि आशिश दिने क्रममा फर्केर जाऊ भनिएको छ । सांस्कृतिक रूपले यो त्यति शोभनीय छैन । तर, फिल्मको कथाका कारण मैले त्यसरी गीत लेखेको थिएँ । उक्त गीतमा नायिका गौरी मल्ललाई शिव श्रेष्ठले मन पराएको हुन्छ र शिव श्रेष्ठ मायाको खोजीमा भैली खेल्ने ठाउँ पुगेको हुन्छ । यो गीत मैले दसैँको समयमा लेखेको थिएँ ।
कुनै पनि स्रष्टाले गीत लेख्दा त्यसलाई पाठकले कति रुचाउँछन् भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्न सक्दैनन् । मात्र, स्रष्टा इमानदार भएर गीत लेख्ने हो । यो यति लामो समयसम्म उत्तिकै लोकप्रिय बन्नुको कारण यसको धुन पनि हो । संगीत, गायन र रचनाको राम्रो संयोजन भयो भने गीत राम्रो बन्छ । यो गीतमा लोचन भट्टराई र नूतन प्रधानले स्वर दिएका छन् भने शम्भुजित बास्कोटाको संगीत छ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
एकपटक हामी थुप्रै संगीतकर्मी र कलाकर्मी एउटा अनुसन्धानका लागि दार्जिलिङ, सिक्किम, सिलिगुडी पुगेका थियौँ । संयोगले त्यो सयम तिहार नै परेको थियो । त्यहाँका कुनाकुनाको गाउँमा पनि यो गीत बजेको सुनेको थिएँ । फिल्मको गीत ह्वात्तै एकैपटक माथि आउँछ र पछाडि पर्छ । तर, केही गीतहरू भने अमर नै हुँदा रहेछन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक ०३, २०७४ समय: ७:२१:५३
सलमानसँगै काम गरेकी अभिनेत्री पूजा अस्पताल भर्ना, उपचार खर्चको अभाव
मोटाएर ५५ केजी भएपछि विकिनी वडी बनाउँदै नायिका बर्षा सिवाकोटी
स्वर्गीय आमाको सपनालाई लिएर फिल्म बनाएकी नेपालकै कान्छी निर्मातामाथी कल्पना बाहिरको यस्तो घात (भिडियो)